UNWTO အထွေထွေညီလာခံမော်ရိုကို - လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုမဖော်ထုတ်ရသေးလား။
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » UNWTO အထွေထွေညီလာခံမော်ရိုကို - လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုမဖော်ထုတ်ရသေးလား။
နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • အစိုးရသတင်းများ • မော် ဦး ကြားဖြတ်သတင်းများ • စပိန်အထူးသတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း
SEGOVIA, SPAIN - မတ်လ ၂၆ ရက်၊ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Zurab Pololikashvili ကိုစပိန်နိုင်ငံ Segovia ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မတ်လ ၂၆ ရက် WTO ဖိုရမ်ဖွင့်ပွဲတွင်တွေ့ရသည်။ (ဓာတ်ပုံ Nacho Valverde/Europa Press မှ Getty Images မှတဆင့်)
UNWTO သည်မော်ရိုကိုတွင် ၂၄ ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
သတင်းရင်းမြစ်များကပြောပြသည် eTurboNewsဤ GA ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သော်လည်း UNWTO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားအသိပေးခြင်းမရှိသောကြောင့်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Zurab Pololikashvili သည်အဘယ်ကြောင့်ဤအရာကိုလျှို့ဝှက်ထားသနည်း။
သတင်းရင်းမြစ်များမှကောလာဟလများအရ UNWTO အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Zurab Pololikashvili သည် ၂၀၂၁ ၂ ဝကိုရွှေ့ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။မော်ရိုကိုနိုင်ငံတွင် ၄ ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည်.
တာဝန်ရှိအိမ်ရှင်တစ် ဦး အနေနှင့် Morrocco သည် COVID-19 တိုးတက်မှုနှင့်ပဋိပက္ခများကိုရှောင်ရှားရန် UNWTO ပွဲအတွက်ရက်စွဲသစ်များအတွက်စိတ် ၀ င်စားသင့်သည်။
UNWTO အထွေထွေညီလာခံ၌ကျင်းပသည် MarrakechCOVID-19 သည်ကမ္ဘာကိုသော့ခတ်ထားသည့်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ကုလသမဂ္ဂအခမ်းအနားဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီတွင်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Zurab Pololikashvil ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသောအခါဤသတင်းသည်ကမ္ဘာ့သတင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
Zurab ၏ဇန်နဝါရီရွေးကောက်ပွဲသည်စပိန်၌အေးခဲသောရာသီဥတုကြောင့် COVID ဖြစ်ပွားမှုများကြောင့် lockdown ကျမှုနှင့်အတူအမျိုးသားရေးဘေးအန္တရာယ်ကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသည်။
UNWTO ၏ယခင်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှစ် ဦး သည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏လုံခြုံရေးအတွက်ဇန်နဝါရီတွင်ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းရန်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်များအားတက်ရောက်ရန်နှင့်အထူးသဖြင့်အခြားသူများအား ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ဤအချိန်သည် SG ၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတွင်သူ၏ပြန်လည်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရန်ဆန္ဒပြင်းပြနေသည့်အချိန်၌ပင်၎င်းသည်ပေါ်လွင်ခဲ့သည်။ ဘာရိန်းကိုမထီမဲ့မြင်မပြုဘူးဆိုတာရှင်းပါတယ်.
ဖေဖော်ဝါရီလတွင် UNWTO အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Zurab Pololikashvili ဦး ဆောင်သော UNWTO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဦး ဆောင်။ ပညာရေးနှင့်လူငယ်များ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့နှင့်အထွေထွေညီလာခံကို ဦး တည်သောတရားဥပဒေအစည်းအဝေးအသေးစိတ်ကိုဆွေးနွေးရန်မော်ရိုကိုသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။
သုံးရက်တာခရီးစဉ်အတွင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူမော်ရိုကိုခရီးသွား ၀ န်ကြီး Nadia Fettah Alaoui ကသမိုင်းဝင်အထွေထွေညီလာခံကျင်းပရန်မော်ရိုကို၏ကတိကဝတ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူကဘေးကင်းလုံခြုံပြီးရေရှည်တည်တံ့သောနည်းလမ်းဖြင့်နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်ရှင်သန်ရန်အရေးကြီးပုံကိုလည်းသူမကအလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မော်ရိုကို ခရီးသွားကဏ္COVID-4.77 နှင့်ပတ်သက်သောခရီးသွားလာရေးကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ၂၀၂၀ တွင်ဒေါ်လာ ၄.၇၇ ဘီလျံ (MAD ၄၂.၄ ဘီလျံ) ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
မော်ရိုကို ၃၇.၅ သန်း
လက်ရှိတွင်မြောက်အာဖရိကရှိနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သောမော်ရိုကိုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် COVID -124 ဖြစ်ပွားမှု ၁၂၄ တွင်ရှိသည်။ မော်ရိုကိုသည်သန်း ၁၁၀ လျှင် ၂၅၁ ဦး သေဆုံးပြီး၊
နှိုင်းယှဉ်လျှင်စပိန်သည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၃၈ ခုနှင့်သေဆုံးမှု ၂၅ ခုရှိသည်။